बचत खातामा पैंसा राख्नु भएकाे छ ? बैंकले तपाईकाे पैंसालाई नै ताकेर यस्ताे गर्न थाले है! – List Khabar
Home / समाचार / बचत खातामा पैंसा राख्नु भएकाे छ ? बैंकले तपाईकाे पैंसालाई नै ताकेर यस्ताे गर्न थाले है!
बचत खातामा पैंसा राख्नु भएकाे छ ? बैंकले तपाईकाे पैंसालाई नै ताकेर यस्ताे गर्न थाले है!
admin February 11, 2022 समाचार Leaveacomment 81 Views
बैंकहरुले निक्षेप बढाउने धेरै काेशिष गर्दा पनि सफल नभएपछि आफुसँग भएको बचत निक्षेपलाई मुद्दतीमा परिणत गराउने गरी योजनाहरु सार्वजनिक गर्न थालेका छन् ।
बचत खातामा रहेको रकम जुनसुकै बेला पनि निकाल्न सकिने डर रहेकाले बैंकले निक्षेपको लागत अलिकति महंगो भएपनि मुद्दती निक्षेप खोल्न जोड दिन थालेका छन् ।
राष्ट्र बैंकको पाँच महिनाको देशको आर्थिक अवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदनले पनि यही तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार कुल निक्षेपमा गत असारमा बचत निक्षेपको अंश ३४.२ र मुद्दती निक्षेपको अंश ४७ प्रतिशत थियो ।
राष्ट्र बैंकले हालै प्रकाशित गरेको चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनासम्मको तथ्यांक अनुसार वाणिज्य बैंकहरुमा बचत निक्षेपको अंश घटेर ३१.५ प्रतिशत र मुद्दती निक्षेपको अंश बढेर ५४.३ प्रतिशत पुगेको छ ।
बैंकलाई बचत निक्षेप भन्दा मुद्दती निक्षेपमा लागत बढी पर्ने गर्दछ तर मुद्दती निक्षेपको एउटा फाइदा भनेको निश्चित समयसम्मको लागि खाताको रकम बैंकमै होल्ड हुन्छ यसबापत् वचतमा भन्दा बढी व्याज खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरुले मुद्दती निक्षेपमा दोहोरो अंकमा व्याज प्रदान गर्न थालेकाले मुद्दती निक्षेपमा धेरैको आकर्षण देखिएको बैंकरहरु बताउँछन् ।
संक्रमण एकदमै उच्च रहेका बेला बैकहरुले मुद्दतीमा साढे ३ देखि ४ प्रतिशतसम्म मात्रै व्याज दिने गरेका थिए भने बचतमा १ प्रतिशत हाराहारी मात्रै व्याज दिन्थे ।
अहिले मुद्दतीमा १० प्रतिशत भन्दा बढी व्याज दिने गरेको छ । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा त झनै ११ प्रतिशतकै हाराहारीमा व्याज पाइन्छ ।
मुद्दती निक्षेप र बचत निक्षेपबीच कम्तिमा ५ प्रतिशतको अन्तर हुनुपर्ने कारणले धेरै जोखिम लिन नचाहने निक्षेपकर्ताले अहिले धमाधम आफ्नो बचत निक्षेपलाई मुद्दतीमा बदल्न थालेको बैंकहरु बताउँछन् ।
पछिल्लो समय बैंकहरुले पनि लामो अवधिको मुद्दती निक्षेप एवम् बचत र मुद्दती दुवै विशेषता भएको हाइब्रिड प्रकारको योजनाहरुको थालनी गर्न थालेका छन् ।
बचत खातामा भन्दा मुद्दती निक्षेप खातामा राख्दा बढी व्याज पाइने एवम् ३ महिनामै यस्तो खातामा १० प्रतिशत भन्दा बढीको व्याज पाइने हुनाले निक्षेपकर्ताहरु मुद्दती निक्षेपमा आकर्षित भएको सानिमा बैंकका पूर्व कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बताए ।
सिबिफिनको अध्ययनमा मुद्दती निक्षेप पनि २ वर्षभन्दा कम अवधिको निक्षेप ८० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको देखिएको थियो । यही ग्यापलाई कम गर्ने प्रयास स्वरुप नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको आफनो ३६ औं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा एनआईबीएल गज्जब ६ मुद्दती खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ जुन २० वर्षको अवधिको हुनेछ ।
न्यूनतम १० हजार रुपैयाँमा जुनसुकै उमेर समूहका व्यक्तिले खोल्ने सकिने यो खातामा निःशुल्क क्रेडित कार्ड र साँवा र पाकेको व्याजको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा समेत प्राप्त हुनेछ ।
त्यसैगरी एनआईसी एसिया बैंकले पनि हाइब्रिड प्रकृतिको सर्वश्रेष्ठ बचत खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसमा निक्षेपकर्तालाई लोभ्याउन ८४ लाख रुपैयाँसम्मको विभिन्न निःशुल्क विमा सुविधाहरु थपिएको छ ।
बैंकले प्रदान गर्ने ८४ लाखको बिमा ४० लाख रुपियाँ बराबरको दुर्घटना बिमा, अर्को ४० लाख बराबरको विभिन्न घातक रोग लागेबापत दिइने बिमा र ४ लाख रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य बीमा समेत संलग्न रहेको छ । ४ लाख स्वास्थ्य बीमा पनि ८० हजार अपरेसन खर्च र ३ लाख २० हजार हस्पिटलाइज खर्च तोकिएको छ ।
विदेशी मुद्रा निक्षेप समेत आर्थिक वर्षको शुरुमा १ सय २२ अर्ब रुपियाँ रहेकोमा हालसम्म २६ अर्ब रुपैयाँले घटेर ९६ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ । त्यस्तै विदेशी मुद्राको ऋण समेत १ सय ५४ अर्ब रुपियाँ रहेकोमा माघ तेस्रो सातासम्ममा ६६ अर्बले घटेर ८८ अर्ब रुपैयाँमा सीमित रहेको छ ।
एनआईसी एसिया बैंकले जस्तै बचत खाता र मुद्दती खाताको विशेषता भएको खाताहरु विगतमा ग्लोबल आईएमई बैंक, मेगा बैंकलगायतका बैंकहरुले पनि प्रचलनमा ल्याइसकेको छ । बैंकहरु अहिले जसरी भए पनि बैंकमा बढी भन्दा बढी समय खातामा रकम टिकाउन यस्ता योजनाहरु ल्याउन तल्लीन रहेको देखिएको छ । मेराे लगानीले लेखेकाे छ ।
Previous माघ २८ गते शुक्रवारको तपाईको भाग्यफल यस्तो छ
Next काठमाडौंको शुक्रराज अस्पतालबाट अचम्मका चिनिँया पक्राउ